I-Tourmaline yicrystalline boron silrate yamaminerali ngezinto
tags Luhlaza, Tourmaline, verdelite
Ilitye eliyigugu leVerdelite luhlaza oluhlaza. Senza ubucwebe besiko ngamatye e-verdelite asethwe njengamacici, amakhonkco, isacholo somqala, isongo okanye isangqa. I-Verdelite ...
Iintlobo eziqhelekileyo ze-tourmaline yi-schorl, i-sodium endmember yeqela. Inokuphendula ngama-95% okanye nangaphezulu ...
tags I-Indicol, Tourmaline
Umbala wombala oluhlaza okwesibhakabhaka we-tourmaline intsingiselo kunye nexabiso. I-Indicolite luhlaza oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kumbala oluhlaza okomhlaza oluhlaza weqela le-tourmaline ....
Senza ubucwebe besiko ngombala we-tourmaline wamatye okanye ilitye le-elbaite njenge, isacholo somqala, isangqa, amacici, isongo okanye isangqa. I-Tourmaline yicrystalline ...
tags iliso Cat ngayo, Tourmaline
I-Tourmaline yi-crystalline boron silicate yamaminerali. Idityaniswe nezinto ezinje ngealuminium, isinyithi, imagniziyam, isodiyam, ilithium, okanye ipotassium I-tourmaline Ixabiso elixabisekileyo ...
Phantse yonke imibala ye-tourmaline inokufumaneka eBrazil. Ngokukodwa kumazwe aseBrazil eMinas Gerais naseBahia. Ngo-1989, ...
tags Rubellite, Tourmaline
I-Rubellite ebomvu okanye ebomvu-ebomvu ebomvu ye-boron silicate elbaite evela kwiqela le-tourmaline. I-Elbaite Elbaite yisodiyam, ikwakhona i-lithium, i-aluminium boron ...
tags Tourmaline, ujodo, Watermelon tourmaline
I-watermelon i-tourmaline yekristal intsingiselo yentsingiselo kunye neepropathi zamatye anqabileyo. I-watermelon tourmaline ziintlobo ngeentlobo zeetalmaline ezinemibala egxile ngaphakathi kunye nobomvu ngaphakathi kunye nohlaza ...
tags mnyama, I-tourmaline emnyama, Tourmaline
Ilitye le-crystal emnyama yentsimbi enentsingiselo. I-tourmaline emnyama yi-crystalline boron silicate yamaminerali. Ezinye izinto ezilandelwayo zi-aluminium, isinyithi, kunye nemagniziyam, ...
Ukutshintsha kombala kwe-chrome tourmaline
Ukutshintsha kombala kwi-chlorum ye-tourmaline iTourmaline yiminerali yelitye le-boron silrate edityaniswe nezinto ezifana nealuminiyam, intsimbi, i-magnesium, isodium, i-lithium, okanye ...